I-101 YEETTOOS ZEPHOENIX EZILUNGILEYO ZAMADODA: IZIMVO ZOYILO OLUPHOLILEYO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 yeeTattoos eziPhezulu zePhoenix zaMadoda
IPhoenix kudala imi njengophawu lokuzalwa kwakhona, kwaye kumadoda amaninzi, imele isenzo sokuvuka eluthuthwini ukuqala ngokutsha. I-tattoo yePhoenix yenye yezona zimvo zithandwayo ze tattoo kumadoda. Ngentsingiselo entle kunye nemibala eqaqambileyo ehlala ibonisa intaka yasePhoenix ibhabha ngaphandle komlilo kunye namalangatye, imibono epholileyo yokuyila umvambo iPhoenix inyanisile.
Iifoto zePhoenix zabafana nazo ziyabhetyebhetye ngokumangalisayo. Nokuba ufuna iPhoenix isifuba , ingalo , igxalaba, igcwele okanye umkhono wesiqingatha, umlenze , ingalo , icala, okanye umva tattoo, kukho uyilo olubonakala luhle. Amadoda anokukhetha ukufumana iindlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kubandakanya i-Phoenix yendabuko, yesizwe, okanye yaseJapan enemizobo emibalabala okanye imibala emnyama nengwevu.
Nazi ezona zixhobo zibalaseleyo zeToenix zoyilo lwamadoda. Ukusuka kuyilo oluncinci ukuya kwingcaciso yeentsomi yasePhoenix ekhulayo evela kuthuthu kumkhono wakho, ezi tattoos ze-badass Phoenix ziya kukukhuthaza.
1Iintsingiselo yegama lokuqala, imvelaphi, ukuhambelana kwegama kunye neneniso Phoenix Tattoo
MbiniIimbono zeTattoo ezipholileyo zePhoenix
3Eyona yoyilo ilungileyo yePhoenix Tattoo
Iintsingiselo yegama lokuqala, imvelaphi, ukuhambelana kwegama kunye neneniso Phoenix Tattoo
IPhoenix yinxalenye ebalulekileyo yeentsomi zamaGrike. Ngokwasebalini, iPhoenix yintaka yelanga ezakudubula idangatya xa isifa. Ukusuka eluthuthwini, intaka entsha yasePhoenix iyavela. Ngokwesiko, iPhoenix ifanekiselwa sisidalwa esinamandla esikhanyayo.
Ngenxa yoku, intsingiselo ye-Phoenix tattoo kukuzalwa ngokutsha, ukuguqulwa, kunye nokungafi. Abafana abaye bafumana ubunzima okanye utshintsho ebomini babo bahambelana nePhoenix.
Yenzelwe ukufuzisela ukuqala ngokutsha kunye nokuzimisela ukwenza ngcono kwaye ube ngumntu olungileyo ebomini. Nangona kunjalo, kwinkcubeko yaseAsia, iPhoenix imele ubabalo, ukuchuma, ubunyulu kunye nococeko, kwaye ihlala ibhalwe umvambo yoyilo olunemibala.
Iimbono zeTattoo ezipholileyo zePhoenix
I tattoo yakudala yasePhoenix imele intaka eyoyikekayo enamaphiko amade, iintsiba ezibaleka umsila, kunye neetaloni ezibukhali ezibonakala ngathi ziqhuma kumalangatye, umlilo kunye nothuthu.
Nangona uninzi lwamadoda lukhetha ukumelwa okwenyani kwePhoenix eneentsiba kunye neempawu, ezinye zeempawu ezimangalisayo zePhoenix zikhangeleka zinobubi kwaye ziyoyikeka ngombala omnyama nokungwevu.
Umvambo wakho wePhoenix unokuba mncinci kwaye ulula, ubunjwe ngokupheleleyo kuyilo lwesizwe, okanye uthathe isitayile saseJapan ngokudibanisa ingwe, inamba , kunye nePhoenix. Indawo efanelekileyo ye-inki yakho iya kuxhomekeka kumbala, isitayile kunye nobungakanani obufunayo.
Umzekelo, uyilo olupheleleyo lwePhoenix tattoo lubonakala luhle ngombala. Umbala obomvu ocacileyo, omthubi, ohlaza okwesibhakabhaka, o-orenji, kunye nohlaza uya kwenza ukubonakala okuhle.
Nangona kunjalo, iPhoenix emnyama okanye emnyama kunye engwevu inentsingiselo kwaye ibadass , ngakumbi ngomzobo opholileyo osebenzisa ngokupheleleyo igxalaba nengalo ngemibala emnyama.
I tattoo elula elula, encinci yasePhoenix inokulingana kweyakho isandla isihlahla, iqatha, ithole, ingalo , icala, okanye bicep . Kodwa sicebisa kakhulu ukuba wenze okusesikweni kwesidalwa sentsomi ngeqhekeza elikhulu le tattoo.
Izimvo ezinkulu zePhoenix tattoo zinokuqala ngomsila kunye namaphiko asezantsi egxalabeni nakwingalo ephezulu, ngentloko nomzimba ngaphesheya isifuba kunye necala.
Iingcamango ze-tattoo sleeve zamadoda
Ngokufanayo, unokufumana iPhoenix Umvambo womkhono kwaye uyilo lusongele ngengalo yakho okanye ngengalo yangaphambili.
Ngenye indlela, jonga iPhoenix egxalabeni lakho kwintetho eyindoda enokuba yoyikisa kwaye ibe nomtsalane.
Abanye abantu bakhetha a umva , umlenze , okanye umvambo wethanga kwitayile enkulu enokubonisa ukuvuka kwePhoenix inyuka. Ngenxa yendawo, isifuba kunye neetattoo zasemva ziqhelekile kuyilo lwePhoenix.
Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zetatoos zeentaka zasePhoenix, amadoda anakho ukuyila eyona nkangeleko ilungileyo yendawo anqwenela ukuyifumana kunye nentsingiselo.
Eyona yoyilo ilungileyo yePhoenix Tattoo
Ukukunceda ufumane eyona tattoo ilungileyo yePhoenix, jonga ezi yoyilo ze-badass zamadoda. Ngamnye wahlukile ngendlela yakhe, ke zive ukhululekile ukukhetha into oyithandayo kwaye usebenze nomculi wakho ukwenza eyakho inguqulelo.
inwele ezityebileyo amadoda
iintlobo zokucheba iinwele zamadoda